Guddoomiyihii Maxkamada Sare ee dalka ee shalay madaxweynaha Soomaaliya uu xilka qaadista ku sameeyey ayaa kasoo horjeestay xilka qaadistaas. Ibraahim Iidle Suleymaan oo la hadlay Idaacadda Voa laanteeda Afka Soomaaliga ayaa sheegay in xilka qaadistaas ay tahay mid aan sifo sharci ahoo marin,isla markaana isagu uu weli yahay guddoomiyaha Maxkamada Sare ee dalka. Waxa uu sheegay in dastuurka dalka uu dhigayo kal qeyb sanaanta awoodaha sidaas darteedna garsoorku uu ka madax banaan yahay lamaha kale ee dowladda,isla markaana uu weli yahay guddoomiyaha maxkamada sare Shaqooyinkiisa Dastuuriga ahna uu wadanayo sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay ogaanayaan in Shaqadii ay sideydii u sii socon doonto. Sikastaba kasoo horjeesashada xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyihii maxkamada sare ayaa ah khilaaf cusub walow weli madaxtooyada Soomaaliya aysan ka hadlin. Muqdisho 28ka May 2018 Inbadan oo ka mid ah xildhibannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka hor yimid xil ka qaadista madaxweyne Farmaajo ku sameeyay Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan. Waxaana ma mid Xildhibanada kasoo horjeestay Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Baarlamaanka Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali ayaa sheegay in Madaxweynaha looga baahan yahay in uu xuso qodobadda Dastuurka ama Xeerarka garsoorka ee uu u cuskaday xilka qaadista garyaqaan Iidle. “Haddii dasturki aan la cuskan ama garsoorki xeerarkiisa aan la raacin waxay noqoneysaa in arinkaasi sida ugu dhaqso badan baarlamanka ka fariisto…” ayuu yiri Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali. Sidoo kale Xildhibaanka ayaa ku dooday in loo baahnaa in madaxweynaha uu faro xukuumadda inay dedejiso soo hordhigida baarlamanka ee Guddiga Adeegga Garsoorka oo marki u dambeysay ay codsatay in bil gudaheda ay ku keeni doonto barlamanka, si guddigaasi uu ugu soo gudbiyo xukumada qofka qaban kara xilalka garsoorka. | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Guddoomiyihii Maxkamada Sare ee dalka ee shalay madaxweynaha Soomaaliya uu xilka qaadista ku sameeyey ayaa kasoo horjeestay xilka qaadistaas. Ibraahim Iidle Suleymaan oo la hadlay Idaacadda Voa laanteeda Afka Soomaaliga ayaa sheegay in xilka qaadistaas ay tahay mid aan sifo sharci ahoo marin,isla markaana isagu uu weli yahay guddoomiyaha Maxkamada Sare ee dalka. Waxa uu sheegay in dastuurka dalka uu dhigayo kal qeyb sanaanta awoodaha sidaas darteedna garsoorku uu ka madax banaan yahay lamaha kale ee dowladda,isla markaana uu weli yahay guddoomiyaha maxkamada sare Shaqooyinkiisa Dastuuriga ahna uu wadanayo sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay ogaanayaan in Shaqadii ay sideydii u sii socon doonto. Sikastaba kasoo horjeesashada xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyihii maxkamada sare ayaa ah khilaaf cusub walow weli madaxtooyada Soomaaliya aysan ka hadlin. Muqdisho 28ka May 2018 Inbadan oo ka mid ah xildhibannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka hor yimid xil ka qaadista madaxweyne Farmaajo ku sameeyay Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee dalka Ibraahim Iidle Suleymaan. Waxaana ma mid Xildhibanada kasoo horjeestay Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Baarlamaanka Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali ayaa sheegay in Madaxweynaha looga baahan yahay in uu xuso qodobadda Dastuurka ama Xeerarka garsoorka ee uu u cuskaday xilka qaadista garyaqaan Iidle. “Haddii dasturki aan la cuskan ama garsoorki xeerarkiisa aan la raacin waxay noqoneysaa in arinkaasi sida ugu dhaqso badan baarlamanka ka fariisto…” ayuu yiri Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali. Sidoo kale Xildhibaanka ayaa ku dooday in loo baahnaa in madaxweynaha uu faro xukuumadda inay dedejiso soo hordhigida baarlamanka ee Guddiga Adeegga Garsoorka oo marki u dambeysay ay codsatay in bil gudaheda ay ku keeni doonto barlamanka, si guddigaasi uu ugu soo gudbiyo xukumada qofka qaban kara xilalka garsoorka.
Muqdisho(ANN)-Khilaaf siyaasadeed, ayaa ka dhashay xil ka qaadis uu Madaxweynaha dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sameeyay Guddoomiyihii Maxkamadda Sare Ibraahim Iidle Saleebaa. Kadib markii shalay uu xilka ka qaaday Madaxweyne Farmaajo.
Ibraahim Iidle Suleymaan, ayaa Idaacadda Voa laanteeda Afka Soomaaliga u sheegay in xilka qaadistaas lagu sameeyay ay tahay mid aan sifo sharci ahoo marin,isla markaana isagu uu weli yahay guddoomiyaha Maxkamada Sare.
Waxa uu sheegay in dastuurka dalka uu dhigayo kal qeyb sanaanta awoodaha sidaas darteedna garsoorku uu ka madax banaan yahay laamaha kale ee dowladda,isla markaana uu weli yahay guddoomiyaha maxkamada sare Shaqooyinkiisa Dastuuriga ahna uu wadanayo sida uu hadalka u dhigay.
Xil ka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyihii maxkamada sare ayaa abuurtay khilaaf cusub waxaana ka hadlay qaar ka mid ah xildhibannada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ka hor yimid xil ka qaadista madaxweyne Farmaajo ku sameeyay Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee dalka Ibraahim Iidle Saleebaan.
Xildhibanada kasoo horjeestay xil ka qaadista waxa ka mid ah Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Baarlamaanka Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali oo sheegay in Madaxweynaha looga baahan yahay in uu xuso qodobadda Dastuurka ama Xeerarka garsoorka ee uu u cuskaday xilka qaadista garyaqaan Iidle.
“Haddii dasturki aan la cuskan ama garsoorki xeerarkiisa aan la raacin waxay noqoneysaa in arinkaasi sida ugu dhaqso badan baarlamanka ka fadhiisto…” ayuu yidhi Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa ku dooday in loo baahnaa in madaxweynaha uu faro xukuumadda inay dedejiso soo hordhigida baarlamanka ee Guddiga Adeegga Garsoorka oo marki u dambeysay ay codsatay in bil gudaheed ay ku keeni doonto barlamanka, si guddigaasi uu ugu soo gudbiyo xukuumadda qofka qaban kara xilalka garsoorka.